INkosikazi uCharlotte yabhaptizwa
Ngobusuku bokugqibela eSandringham, kwinqanaba laseNorfolk, ibandla laseSt. Mary Magdalene lenza umcimbi wobhaptizo ngentombi kaKeith Middleton kunye noPrince William, uMninimzi uCharlotte. Indawo yokubhaptizwa yanyulwa kungekhona ngengozi - kwakukho ngo-Agasti 1961 umcimbi wokubhaptizwa kuka-ugogo wenkosikazi encinane, u-Diana Spencer, yenzeke.
Intsapho encinci yeNkosana uWilliam esebenza ngokugcwele ecaweni ngo-16: 30. UKate, njengokuba wayesoloko, wayegqoke ngokugqithiseleyo: wayenengubo emhlophe evela kumyili wezinto eziqingqiweyo uAlexander McQueen kunye nentsimbi ekhompyutheni kwimoya yecwecwe (le yindlela ekhethwa nguDuchess of Cambridge). UWilliam wayegqoke isambatho esiluhlaza okwesibhakabhaka, kwaye kwiGeorge encinane kwakukho iifutshane ezibomvu kunye nekhati elimhlophe elinemibala ebomvu.
Isakramente yobhaptizo yenziwa nguMbhishophu omkhulu waseCanterbury, u-Justin Wellby. Ngethuba lo mthendeleko, iingoma ezikhethiweyo zendlu yobukhosi kwale mzuzu zavakala: Yehla, Othanda UThixo kunye nokudumisa eNkosini, uSomandla.
I-Kensington Palace yabika ukuba abahlobo besikolo sikaWilliam-uTompy Win Stroubenzi kunye noJames Mead, umngane wabantwana uKate-Sophie Carter, umzala wakhe uAdam Middleton, noLaura Fellowes, isihlobo sikaPrincess Diana, baba ngabafundi be-school girl of the princess.
I-christening kaCharlotte yiholide yeBritani
Kuphela abasondeleyo - uElizabeth II noPhilip Philip, uNkosana uCharles kunye noDuchess kaCamille, abazali bakaKate - uMichael noCarol, udade weDuchess yaseCambridge Pippa kunye nomzala wakhe uMichael - wadibana kwi-christening kaCharlotte. Izihlobo eziseduze kuphela ezazingenakuza-umzalwana kaWilliam Harry, owathi iintsuku ezimbalwa ezedlula kunye nomsebenzi wokunceda eNamibia.
Nangona ukuba ubhaptizo luvaliwe, abaseBrithani baqala ukuhlangana kufuphi netempile ukususela ekuseni. Njengamaxesha onke, umthendeleko weentsapho zobukumkani waba ngumcimbi wokwenene woBukumkani bakhe. Intsapho yasebukhosini ayizange iphazamise abo bavakalisa umnqweno wokubingelela iCharlotte encinane kwisitalato ngaphambi kokubhaptizwa: yonke indawo ejikeleze iBandla likaMary Magdalene yayigcwele amabritoni.
Zonke izipho kunye neentyantyambo abalandeli beentsapho zasebukhosini babethunyelwa kwicawa babethunyelwa kwi-Hospice ye-Angle's Children's Hospice, ejongene neKate.
Umthendeleko wawukhawuleza-kungakapheli imizuzu engama-30, emva koko intsapho yamakhosi yayiya kwisidlo sakusihlwa. Kubalulekile ukuthetha ukuba ngexesha lokulungiselela i-christening yeCharlotte, ishati yomdabu yenziwe ngokukhethekileyo-ikopi yowokuthi ngo-1841 intombi endala ye-Queen Victoria yabhaptizwa.
Amanzi ukuze ubhaptizwe aziswa ngokuthe ngqo kuMlambo iYordan. Ngozuko lwesiganeko esibalulekileyo sangoo-izolo, i-Mint yoBukumkani ikhuphe iirhafu zemali ezikhumbuzo ezikhethekileyo.
Umyeni ka-Xenia Borodina uthetha ngeendlela ezingaqhelekanga: i-Kurban Omarov ababhalisile
Ubuqili-Cristiano Ronaldo: ingwenya okanye intloni?
U-Ksenia Sobchak waphinde wadideka wonke umntu ngokukhulelwa kwakhe, ifoto
U-Ekaterina uBharnabhas waqeda umtshato womnye, ividiyo
UJoseph Prigozhin uhalalisela ngokukhulelwa u-Valeria oneminyaka engama-49 ubudala
Isitshalo seqanda ngeentyatyambo zamakhowe
I-baked baguette yokutya kwasekuseni
Indlela yokuphatha i-pharyngitis indlela zabantu
Iindidi ezinambithekisayo kunye neendaphula kwikhofi yaseMelitta®
Ikhekhe lephunga ngeapulo
Indlela yokucoca insimbi ekhaya
Isiqulatho sezinto eziphilayo kunye nokusebenza kwabantu
Emva kwakho konke, ukuzikhethela kubaluleke kakhulu kubhinqa
Iimonyo ze-egg kunye nokunakekelwa kwesikhumba
Utamatisi ogqoke ngeeshizi